एक श्रीमानका तीन श्रीमतीहरु एउटै घरमा मिलेर बस्छन् यसरि: भिडियोसहित – पुरा पढ्नुहोस्……
एक श्रीमानका तीन श्रीमतीहरु एउटै घरमा मिलेर बस्छन् यसरि: भिडियोसहित
तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला एक श्रीमानका तीन श्रीमतीहरु एउटै घरमा मिलेर बस्छन् । न्युजर्सीमा रहेका एक व्यक्तिको घरमा तीनजना श्रीमती श्रीमानसँग मिलेर बस्छन् । प्राय एक श्रीमतीसँग पनि सम्बन्ध राम्रो नहुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको ठाउँमा यी व्यक्तिले भने आफ्नी तीनवटी श्रीमतीलाई मिलाएर सँगै राख्न सकेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् ।
वेनसा हसल नाम गरेकी महिलाको पति तथा उनका बच्चाहरुसँग सम्बन्ध एकाएक बिग्रिएको थियो । टुटेकी बेनिसामा सानो आश थियो एकपटक फेरि पतिसँगको सम्बन्ध राम्रो बनोस । उनको आशा पुरा भयो । बेनिसा र पाली टुटेको सम्बन्ध एकपटक फेरि सुमुधुर बन्यो । त्यतिजेन्लसम्ममा पालीको जीवनमा दुई युवतीहरुको आगमन भइसकेको थियो । हैजल, २७ वर्षकी युवती तथा लेडी नाम गरेकी २५ वर्षकी युवती ।
यथार्थ बुझिसकेपछि बेनिसाले उनीहरुसँगै रहने निर्णय गरिन् । उनी अब पति तथा उनका दुई श्रीमतीसँग निकै खुसीका साथ बस्दै आइरहेकी छिन् । यहाँसम्मकी उनीहरु एकअर्कालाई आफ्नो अतिमिल्ने साथीको रुपमा बताउँछन् ।
मेल अनलाइनले दिएको जानकारी अनुसार यसरी फोरसम परिवार भएको हो । उनीहअरु नियमित रुपमा डिनर डेटमा जाने गर्छन् । यहाँसम्मकी उनीहरु सँगै सुत्छन् । जिम जानेदेखि हरेक काम उनीहरु मिलेर गर्छन् ।
पालीले आफ्ना तीन श्रीमतीका लागि सिस्टर वाइभ्स नाम गरेको टिर्सट उपहार दिएका छन् । उनीहरु उक्त टिसर्ट लगाएर बाहिर विभिन्न कार्यक्रममा समेत जाने गरेका छन् । तीनवटै श्रीमतीले पालीको अनुहारको टाटु आफ्नो शरिरमा खोपेका छन् । साभार: ताजा अनलाइन खबर/एजेन्सी–
Prevरबि भगवान हुन भन्दै अन्तरवार्तामै रोएका दिलनिशानी मगर….. एकपटक सबैले हेर्नुपर्ने यो अन्तरवार्ता
Nextआखिर के हो रवि लामिछानेले भनेको भुत ? अनि अदृश्य शक्ति ? के हो त सत्य कुरो ? हेर्नुहोस्
श्रीमती र छोराछोरी भेट्न सोमबार अस्ट्रेलिया जान भिषा र टिकट लिएर बसेका डिआइजी भण्डारीको अधुरै रहयो परिवारसंग भेट्ने सपना ! यसरी टुट्यो
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य, बजारमा सुनको मुल्यले नयाँ रेकर्ड कायम..
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य तोलामै यति तल झर्यो..
अन्तर्राष्ट्रिय महिला कब्बडी नेपालमा ,नेपालले भारतलाई सुरुवार्ती दीन मै यसरि धुलो चटायो …(भिडियो सहित हेर्नुहोस)